CHERRY KU SHUBIDA: CUNNOOYINKA UGU FIICAN EE KHAMRIGA IYO CUNTOOYINKA AAN KHAMRIGA KU SALAYSAN - CHERRY
Ugu Weyn Ee Cherry
Sifooyinka samaynta hirarka lafdhabarta guriga
Dhadhaminta tartiib tartiib ah, midab qurux qurux leh oo qurux badan, caraf sharaf leh - waa wax walba oo ku saabsan tincture cherry caan ah oo dhan adduunka oo dhan. Waxaa jira dhowr cuntooyin aasaasiga ah oo loogu talagalay hudheelka guriga: Liwada khamriga caadiga ah iyo tincture oo aan khamri ahayn.
Selection of berry
Ma jiraan shuruudo adag oo lagu dooranayo berry cherry, ku dhawaad ​​noocyo kala duwan ayaa ku habboon. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in miraha ay bislaadaan, casiir leh, udgoon iyo si fiican.
Doorashada ugu fiican - noocyo macaan iyo midhaha. Miraha waxaa loo isticmaalaa cusub, la qaboojiyey ama la qalajiyey. Miro la barafeeyey, oo la heli karo sanadka oo dhan, ayaa aad ugu habboon soo goynta miraha cusub (marka laga reebo halsano dabiiciga ah).
Lafaha tincture dhamaystiran tartiib tartiib ah (dhadhan quruxda qurux). Iyadoo ku xiran xulashada dhadhanka iyo dhadhanka, lafaha ayaa ka tagay ama laga saaray. Guriga, lafaha waxaa laga saari karaa iyadoo la isticmaalayo pin nabdoon caadi ah.
Ma taqaanaa? In godadka of jeeriga ah qadar weyn oo ah prussic acid iyo cyanide waa mid xoog leh. Iyadoo lala xiriirayo khamriga, walxahan waxay leeyihiin saameyn sun ah oo ku saabsan jirka bini'aadamka.
Sida loo sameeyo liistada khamriga khamriga ee guriga
Wixii soo saarista ee tincture caadiga ah on jeeriga, marka hore oo dhan, berry cherry, sonkorta iyo aalkolada ayaa loo baahan yahay. Berry wuxuu ku adkeeyaa khamriga xoogga leh - vodka, cognac, moonshine ama aalkolo.
Ha iloobin inaad fiiriso tayada aalkolada. Isku day in aadan isticmaalin khamriga ugu raqiisan. Vodka waa in ay ahaato iyada oo wax lagu daro. Sonkorta waa ka fiican tahay inaad qaadato adoo aan si fudud u milmin.
Sidaa daraadeed, aan aragno sida loo sameeyo aqal-kiriim ah kalluun qolof ah.
Liiska waxyaabaha loo baahan yahay
Waxaan u baahan doonaa:
1 kg oo ah khudradda cusub ee la dubay ama la qaboojiyey;
Sonkorta 320 g;
0.45 l / 450 g oo khamri ah (vodka, brandy, moonshine ama 45% aalkolo).
Marka hore waxaad u baahan tahay in aad podvyalit berry cherry. Waxaan soo saarnaa miraha cusub ama mid la qaboojiyay si siman oo uga tago qorraxda dhowr maalmood. Doorasho kale waa in la dubo miro foornada 5-6 saacadood heerkul ah 60-80 ° C. Thanks to qalajinta of berry ka baxaan qoyaan dheeraad ah, taas oo ka dhigaysa tinwaynta tincture. Si kastaba ha noqotee, tallaabadani waa doorasho, waad ka boodi kartaa.
Ka saar lafaha midhaha.
Waxaan u kala qaybin karnaa saxarada bangiyada, ku dar sonkorta oo ka bax fasaxyada illaa inta ay midhaha siinayso casiir.
Waxaan khamri ku shubi karnaa daasadaha diyaarka ah, daboolka daboolka, si fiican u rux oo u wareeji hoy iyo diiran (15-25 ° C) meel 15-18 maalmood.
Marka xigta, dhowr jeer ayaan ku nadiifinaa dareeraha soo baxa iyada oo la marayo faashad ilaa uu noqdo mid cad.
Tincture ka dhajiyey diyaar. Cabbitaanka ku hay qolka madow ee qabow. Nolosha sheyga ee shaqadu waa 3 sano.
Waa muhiim! Waxaa lagugula talinayaa inaadan maydhin berry. Sidoo kale, isku day inaad iska ilaaliso goosashada isla markiiba ka dib roobka. Hadday khudradda wasakhaysan lahayd in la maydho, daweeyo berry ah khamriga la iibsaday khamriga (marnaba ma cadaadin ama roodhida qalalan).
Liillada Cherry oo aan lahayn vodka iyo khamriga
Mararka qaarkood juice cherry ayaa la sameeyey iyada oo aan lagu darin vodka ama khamriga. Bedelkii khamriga, waxaad isticmaashaa biyaha caadiga ah ee la nadiifiyey. Tiknooloojiyada waxsoosaarka - way ka adag tahay kiiskii kowaad. Cabbitaanka soo baxa wuxuu u eg yahay khamriga liigeysan. Ma jiraan wax ur ah alkool, iyo dhadhanka cabitaanku waa mid aad u jilicsan (xoogga aan ka badnayn 12%).
Waxaad ka samaysan kartaa khamri guriga ka soo baxa canabella, raspberries, tufaax, yoshta, blueberries iyo xitaa compote, macaanka, kiriimka budada ah.
Waxa loo baahan yahay cunto karinta
Wixii shub ah oo aan lahayn vodka iyo khamriga aad u baahan tahay:
3 kg oo miro khudrad ah;
1.2 kg oo sonkor ah;
400 ml oo biyo ah.
Sida loo cabo guriga
Giriiga bisil waa in la diiriyaa.
Qeybta hoose ee gasacyada saddex-litir waxaan kudhowaad 300 oo garaam oo sonkor ah. Next, isbedelka, layers layers of cherry iyo sonkorta haray.
Ku dar shubka biyaha ah. Biyaha ma qulqulaan qoorta, laakiin garbaha, tan iyo xumbo iyo gaas la sii daayo inta lagu jiro muddada halsano.
Geli dharka daawada ee qoorta. Riix caarada adigoo xarig ah ama giraan ah. Mid ka mid ah gacmo-galinta faraha, waa in aad marka hore dalool yar yar leh irbad. Intii gacmo-galis ah loo oggolaan lahaa in la rakibo xidhka biyaha.
Waxaan u wareejinnaa foornada mugdi iyo diiran (18-28 ° C) ama ku dabool maro qaro leh. Ka dib 2-3 maalmood waa u muuqdaan xumbo. Kumbuyuutarku waa inuu yaraadaa, oo shubka biyuhu waa inuu bilawdaa xabbado. Calaamadahaasi waxay tilmaamayaan in hannaanka halsano uu si caadi ah u socdo.
Faleebo badanaa waxay ku wareegayaan qiyaastii 25-55 maalmood. Ka dibna gashiga waa la jarjaray, bacda biyaha ayaa joojisa bacda. Marka ay ku dhow dahay dhammaan kaneecadu way baaba'aysaa, waa calaamad muujineysa inaad sii socon karto wajiga xiga.
Ku shub dareeraha bakeeriga cusub, isku day inaad ka takhalusto haraadiga saxarka ee jeeriga.
Ku difaac dareeraha ilaa 2 maalmood ah weel xiran.
Fiiri dareeraha ilaa dhowr lakab oo faashad ah.
Buufiska waa dhalo (oo doorbidan muraayad mugdi ah), si adag u xir xirmooyinka taraafikada.
Waxaan u kala wareejinaynaa qaboojiyaha ama qaboojiyaha leh heerkul ah 5-15 ° C. Si loo hagaajiyo dhadhanka waxaan ku haynaa daadinta shuruudahan oo kale illaa 50 maalmood.
Ku kaydi cabitaanka cherry ee qolka qabow iyo madow. Nolosha shafka ah ee calaamadda - wax ka badan 3 sano.
Waa muhiim! Si aan infekshanku kuugu shubin maadada ama sheyga kale, waa lagama maarmaan in la nadiifiyo qasacadaha biyaha karkaraya. Intaa waxaa dheer, si taxadar leh u qaado pickled berry, ka takhalusi midho caaryar. Dhammaan shaqada waxaa lagu sameeyaa oo kaliya gacmaha maydhay.
Cunto loogu talagalay caajiska: liiska ugu fudud ee cherry
Liistada soo socota ee ku taal guriga ayaa la sameeyaa iyada oo loo eegayo calyada la xaqiijiyay iyo sahlan. Xaaladdan oo kale, ka saarista godadka ka soo baxa miro ee cherry looma baahna. Intaa waxaa dheer, habka wax soo saarka waa mid aad u fudud in ay u baahan tahay xaddiga ugu yar ee waqtigaaga iyo dadaalkaaga.
guryaha, daawooyinka kala duwan waxay leeyihiin tinctures ee dhirta, daawooyinka - Paeonia officinalis, bezvremennika, goutweed lowska Manchurian, Mahonia aquifolium, anemone, aconite, rosemary, Sulaymaan seal, feathery kalanchoe, periwinkle, geed rotem la yidhaahdo, ama ayax, Potentilla walnut caddaan, goldenrod, saliid primrose fiidkii, calendula .
Waxyaabaha ay ka kooban tahay (seddex litir)
1 kg oo miro khudrad ah;
3 kg oo ah sonkorta granulated;
1 litir oo vodka ah.
Isku dar miro, sonkor iyo vodka dhalada. Si adag u xir dharka daboolka oo u wareeji qolka hadhka leh. Heerkulka qolka waa inuu kala duwanaadaa 20-25 ° C. U adkeyso tincture muddo 30 maalmood ah. Ruxeeysa halbeegga 2-3kii maalmoodba mar.
Cabitaanka la dhamaystiray waxaa lagu sifeeyaa dhowr lakab oo faashad ah.
Cabitaanka qashinka oo si adag u xir xirmooyinka taraafikada. Dhalooyinka dukaanku waa inay ku jiraan Maqalka ama qaboojiyaha. Nolosha shafka waa wax ka badan 3 sano.
Ma taqaanaa? Aromatic oo si sahlan u-sameynta calaamad ah cherry laga soo bilaabo taariikhda hore u adeegtaa sida cabitaan aad u fiican ee miiska xaflad. Cabitaankani waxa uu diyaariyay Ukraine intii lagu jiray xilligii Hetmanat. Foostada qoryaha waxaa ka buuxsamay jeeriga iyo buuxiyey malab cad. Kadibna foostada ayaa lagu riday oo lagu aasay dhawr bilood oo ciid ah ama dhulka. Waxay ka soo baxday cabbitaan sakhradeed oo aad u karsan.
U adeegso tincture cherry lagu kariyey guriga ee a jug weyn. Ka hor intaadan u adeegin. Waxay isku daraysaa macmacaanka kala duwan, shukulaatada iyo miraha. Laga soo bilaabo waxaa badanaa loo diyaariyaa kokteyl la kariyey oo dhir udgoon (xumbo iyo qorfe).
Shuban ayaa sidoo kale sameeyey in lagu daro shaaha kulul ee hal qaado. Waxay kobcinaysaa difaac, waxay caawisaa in laga takhaluso qufaca, waxay hagaajisaa hurdada. Diirinta on cherry khafiifiya dhiig iyo kor u dhejiyaa birta waxaa ku jira.
Awoodaha farsamada ee mashiinka MTZ-1523, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida tusaalaha
Yacliinka yaryar ee yaryar (caadi ahaan) dabiiciga ah iyo guriga
Iskuduwaha dalka ee polycarbonate - faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada khuseeya naftaada
Miisaanka ugu horeeya Baradho "Milena": sharaxaad kala duwan, dabeecad, sawir
Sida loo kala saaro cidhib
Clone Macdanta Apple ee gobolka Moscow
Boorle Hurdid ah
Canab qurux badan
Ku dhejinta geedka canab ee xilliga dayrta
Daaweynta cudurada dhirta
Kiciyaasha kobcinta, ee loo isticmaalo sida waafaqsan tilmaamaha, waxay bixiyaan natiijooyin wanaagsan oo kaliya. Beerta ujeedka hiwaayadku waxay bilaabeen inay isticmaalaan kiciyeyaasha aan ahayn waqti hore, laakiin aad u firfircoon. Waxyaabaha ay ka kooban tahay daawooyinkan, sida ay u saameeyaan dhirta iyo sida waxtar leh? Tixgeli tusaalaha kobcinta kobcinta "Bud". Read More
Dodder Yurub: warshad xun ama dhir daaweyn ah?
Siyaabo badan oo macquul ah oo loo kariyo karootada broccoli ee dhuxusha
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cherry 2019